ဂျက်နက်မာရီဝင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ Davos တွင် ၂၀၁၆ ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက်နေ့က ကျင်းပသည့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ်တွင် စကားပြောနေစဉ်
A Two-Tiered Approach to Specifying Programs (၁၉၈၃)
F. Knabe ၊
R. O'Callahan ၊
ဂျက်နက်မာရီဝင်း သည် ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်ရှိ Data Sciences Institute တွင် Avanessians Director ဖြစ်သည့်အပြင် ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဌာန၏ ပါမောက္ခလည်းဖြစ်သည်။ ၂၀၁၇ ဇွန် ၃၀ ရက်နေ့အထိ မိုက်ခရိုဆော့သုတေသနချိတ်ဆက် (Microsoft Research Connections) နှင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ အဓိကသုတေသနဓာတ်ခွဲခန်များကို ကြီးကြပ်တာဝန်ယူရသည့် မိုက်ခရိုဆော့ဖ်၏ ဒုတိယအလုပ်အမှုဆောင် (Corporate Vice President) လည်းဖြစ်သည်။ ၂၀၁၃ မတိုင်ခင်ထိ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ပန်စဗေးနီးယား၊ ပစ်ဘာ့ရှိ ကာနင်းမီလန် တက္ကသိုလ်တွင် ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဌာန၏ ဂုဏ်ထူးဆောင်ပါမောက္ခ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကွန်ပျူတာနှင့်သတင်းအချက်ဌာနတွင် လက်ထောက်ညွှန်ချုပ်တာဝန်ကိုလည်း ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။. 
ဝင်းသည် formal methods အဖွဲ့အစည်းတွင် ဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် Larch နှင့်ပတ်သက်သော အပိုင်းတွင်လုပ်ဆောင်ရသည်။ သုတေသနပရောဂျက်များစွာကို ခေါင်းဆောင်ခဲ့ပြီး ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုများစွာကိုလည်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ .
Formal Aspects of Computing|Formal Aspects of Computing (North American Editor)
↑ ၁.၀ ၁.၁ ဂျက်နက်မာရီဝင်း at the Mathematics Genealogy Project
↑ "Computational thinking" (2006). Communications of the ACM 49 (3): 33. doi:10.1145/1118178.1118215.
↑ (1999) FM'99 – Formal Methods: World Congress on Formal Methods in the Development of Computing Systems Toulouse, France, September 20–24, 1999 Proceedings, Volume I, LNCS 1708. Springer-Verlag. doi:10.1007/3-540-48119-2. ISBN 978-3-540-66587-8။
↑ (1999) FM'99 – Formal Methods: World Congress on Formal Methods in the Development of Computing Systems Toulouse, France, September 20–24, 1999 Proceedings, Volume II, LNCS 1709. Springer-Verlag. doi:10.1007/3-540-48118-4. ISBN 978-3-540-66588-5။
↑ (1993) Proceedings of the First International Workshop on Larch, Workshops in Computing. Springer-Verlag. ISBN 3-540-19804-0။
↑ (1993) Larch: Languages and Tools for Formal Specification. Springer-Verlag. doi:10.1007/978-1-4612-2704-5. ISBN 978-1-4612-7636-4။
↑ "Linearizability: A correctness condition for concurrent objects" (1990). ACM Transactions on Programming Languages and Systems 12 (3): 463. doi:10.1145/78969.78972.
↑ "Formal methods: State of the art and future directions" (1996). ACM Computing Surveys 28 (4): 626. doi:10.1145/242223.242257.
↑ Jeannette M. Wing။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂျက်နက်မာရီဝင်း&oldid=407788" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ ဇွန် ၂၀၁၈၊ ၁၅:၄၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။